ကျန်းမာရေး( က-အ ) Archives - Page3of3- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးကို ကားနှင့် အပြင်ဘယ်လိုခေါ်သွားမလဲ? မိဘဆိုတာ ရင်သွေးလေးတွေကို အကောင်းဆုံးထက်ပိုတာကိုသာ ပေးချင်ကြသူချည်းသာ၊ အစားအစာဆိုလည်း ဘေးကင်းဖို့၊ သွားလာရင်လည်း ထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ အစစ အရာရာကြိုတင်တွေးတော ပူပင်တတ်ကြသည် ဒါဆို သွားလာတဲ့ အချိန် ဘေးကင်းစေဖို့ မေမေတို့အတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတစ်မျိုး အကြောင်း…
ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်ဘာတွေပြောင်းလဲ လာမယ်ဆိုတာ သိလိုပါသလား? မိန်းမသားတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လက္ခဏာပြခြင်း မတူနိုင်ပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းမတူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ပြလေ့ပြထရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာ များကို အောက်တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (၁) ရင်သားများ တင်း၍နာလာခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းလက္ခဏာများတွင် ရင်သားများ တင်း၍ နာခြင်းပါဝင်ပါသည်။ နို့သီးခေါင်းပတ်လည် အမဲကွင်းမှာ…
All Articlesကျန်းမာရေး( က-အ )အခြားရောဂါများအထွေထွေရောဂါများ
အား ေခါင္း ကိုက္ကိုက္ေနတာ ၾကာၿပီ Psycho ေတာင္ ေဖာက္လာၿပီ ငါ brain ကင္ဆာ မ်ားလား??? တစ္ခ်ိန္လံုးကို ကိုက္ေနတာပါပဲလား အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးေတြလည္း ေသာက္လိုက္ရတာ ေသာက္ေသာက္လဲ ၾကာရင္ အစာအိမ္ပါ ထိေတာ့မယ္ ဆရာဝန္ သြားျပဦးမွပါပဲ…